Dad badan oo iska ilaabay canshuur celinta | Somaliska
2-ka bishaan May ayaa u dambaysa maalinta la xareynayo warqadaha canshuuraha. Sida uu qoray wargeyska Aftonbladet dad ka badan 200,000 qof ayaa iska ilaabay in ay xareeyaan koontadooda bankiga sanadkii hore, taasoo sababtay in aysan Hay’ada canshuuraha (Skatteverket) lacag u soo celin dadkaas.
Skatteverket ayaa sanadkii hore soo rogtay sharci cusub oo faraya in qofka loo soo celinayo lacag ka yar 2000kr uu soo xareeyo koontadiisa haddii kale aan waxba loo soo celin doonin. Wixii ka badan 2000kr ayaa dadka waxaa loogu diri karaa Jeek. Dad badan ayaan xareyn koontada.
Inkastoo aan wali la ogeyn inta qof xareysay sanadkaan ayay wali furantahay fursada aad ku xareyn karto koontadaada si laguugu soo celiyo lacagta canshuurta. Si aad Skatteverket ugu sheegto koontadaada ayaad booqan kartaa xafiiskooda ama waxaad buuxin kartaa foomka ku jira boggooda.
AXSANTA WALAAL JAZAAKAL ALLAHU KHEYRAL JAZAA’A.
ILAAHEY HANAGA DHIGO KUWII SIDOO KALE XUSUUSTA AAKHIRO IYO KHABRIGA.
2 Maay mise 12 maaj , waxaan filaa Maanta oo 2 da Maj ku beeggan waaye , maalinta ugu danbeysa Celinta – Warqadaha Canshuurta.
asc walaalow adigoo mahadsan qoraha Mudane Jimcaale waxaan arkey meelo kale oo ay ku qorantahay 2 DA BISHA MEEY EE MID KEE SAX AH WALAALOW NAGA SOO HUBI KHEYR ALLAHA KUSIIYEE,,
asxaabéey waxaan idinka codsanayaa in aad ii saxdaan dadka laga baro in ay warqada canshuurta xareeyaan ma dadka shaqeeyaa mise xataa kuwa aan shaqayni waaku jiraan?
As. walaalkay xisaab celinta waxaa laga rabaa cid walba oo heshay daqli ka baxsan kaalmadda isquudinta (försörjningstöd), waa laga rabaa dadka qaata kaalmada dhaqdhaqaaqa (aktivitetstöd), iyo dadka qaata kaalmadda ilma haynta (föräldrarpening), ama kaalmada ilmo ku keli ahaanta (underhållsstöd). laakiin hadaan afka la wada fahmo ku dhaho cayrleeyda wax xisaab celin ah lagama rabo.
Si fudud oo casri ah ayaa loo xareyn karaa taleefoonka kuu jawaabaya ayaad ku careyn kartaa si casri ah markii aad geliso personnumerkaaga iyo iyo tirooyinka kale ee qofka la siiyey.
saaxiibayaal waqtiga celinta waraaqaha ugu dambeeya waa 2 maj, waa maanta ee ma aha 12ka maj.
dhaman wan idiin wada salamey waxaan ubaahnaa wax yar oo faah faahin ah in la iga siiyo foomka marka aad celiso ilaa meeqa bilood ayaa la sugi karaa oo lagaaga soo jawaababa qofki wax iga dhaama ha iga so jawaabo wad mahad santihii